Switzerland oo baaraysa in Turkiga uu basaasid ka sameeyay dalkeeda - BBC News Somali
Switzerland oo baaraysa in Turkiga uu basaasid ka sameeyay dalkeeda
Image caption Erdogan ayaa u ol'oleeyay meelmarinta aftidan muranka dhalisay
Dacwad oogeyaasha Switzerland ayaa baaraya sheegashada ah in la basaaso muwaadiniinta Turkiga ah ee Switzerland ku nool.
Dacwad oogeyaasha federaalka ayaa sheegay in ay hayaan "tilmaamo wax ku ool ah" oo muujinaya in ay jiraan basaasid siyaasadaysan, laakiin way diideen in ay sheegeen dadka lagu bartilmaameedsaday.
Arrintan ayaa imaanaysa maalin ka dib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Switzerland uu dhigiisa Turkiga u sheegay in xukuumadda Switzerland ay baari doonto basaasid kaste oo sharcidarro ah.
Dawladda Turkiga ayaa lagu wadaa in ay bisha soo socota qabato afti muran badan dhalisay.
Aftidaas ayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan siin doonta awoodo cusub, laakiin in uu hindisahani meelmaro wuxuu u baahan yahay in uu helo codadka dadka Turkiga ah ee ku nool dalkiisa iyo afarta milyan ee muwaadiniinta ah ee ku nool dalka dibaddiisa.
Laakiin isu soo baxyo taageero loogu raadinayay meelmarinta aftidan oo ka dhici lahaa dalal ku yaalla qaaradda Yurub ayaa la hor istaagay, arrintaas ayaana horseeday muran soo kala dhexgalay Turkiga iyo Jermalka, Netherlands iyo waliba guud ahaan qaaradda Yurub.
Ciyaaryahan Turki ah oo lagu eedeeyay afgambigii dhicisoobay
Ruushka oo duqayn ku laayay askar Turki ah
Masar oo ciyaaryahan caan ah ku dartay liiska argagixisada
Switzerland ayaa hoy u ah in kabadan 70,000 oo muwaadiniin Turki ah, waxayna isku dayday in ay arrintan dhexdhexaad ka ahaato.
Sikastaba ha ahaatee warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in la basaasay dadka Turkida ah ee aadka uga soo horjeeda xukuumadda Erdogan arrintaana ay dhacday intii ay socotay khudbad bishan horaanteedii lagu qabtay jaamacadda Zurich.
Xubin ka tirsan aqalka sare ee Switzerland ayaa gudbiyay dacwad ku aadan in hay'adaha Turkigu ay basaasayaan muwaadiniinta Turkida ah iyo kuwa labada dhalasho haysta ee ku nool Switzerland, wuxuuna dalbaday in baaritaan la sameeyo.
Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa xaqiijiyay in ay 16kii bishan billaabeen baaritaan ku aadan in la babaasayo bulshada Turkida ah ee dalka ku nool, ka dib markii ay heleen tilmaamo wax ku ool ah oo arrintaas ku saabsan.